Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland Oo Khudbad u jeediyay taageereyaasha KULMIYE ee Awdal | Somaliland.Org
November 21, 2012	Boorame (Somaliland.Org)- Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdilaahi ismaaciil (Saylici) oo ay wehelinaysay marwadiisa Marwo Raxma xaaji Muxumed Suldaan ayaa maanta taageerayaasha xisbiga Kulmiye ee Gobolka Awdal kala qayb galay isu soo bax balaadhan oo ay ka sameeyeen xarunta Gobolkaasi ee Boorame iyadoo ay maanta ahayd maalintiisii ugu dambaysay ee maalmahii ololaha Xisbigaasi muxaafadka ah loo qoondeeyey.
Madaxweyne ku xigeenka oo ka qayb galka isu soo baxa ay ku wehelinayeen wasiirada wasaaradaha Caafimaadka, Shaqada iyo arimaha bulshada, wasiir ku xigeenka Waxbarashada iyo tacliinta sare, xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Somaliland, madaxda heer gobol iyo Degmo ee xisbiga iyo musharixiinta xisbiga ugu tartamaya Gobolka Awdal.
Taageerayaasha Xisbiga kulmiye ayaa maanta magaalada boorame ku soo bandhigay baaxadda balaadhan ee ay u hayaan xisbiga muxaafadka ah ee Kulmiye.
Md saylici oo la hadlayey taageerayaasha xisbiga ee isu soo baxa ka sameeyey magaalada boorame waxa uu u gudbiyey farriin uu ka siday Madaxweynaha oo ku saabsanayd sidii ay dadweynaha Boorame u soo dhoweeyeen Madaxweynaha JSL Md Axmed maxamed maxamuud (Siilaanyo) markii uu dhowaan socdaalka ku tegay Gobolkaasi.
Madaxweynaha oo taageerayaasha xisbiga la dardaarmay maalintii u dambaysay ololaha doorashada ee Xisbiga waxa uu ku adkeeyey in codkooda ay la beegsadaan sanduuqii ay labo sano ka hor ku shubeen kuna doorteen Xisbiga Kulmiye.
Munaasabadaas waxaa kaloo hadalo ka jeediyey mas’uuliyiin ay ka mid yahiin wasiirka wasaaradda Cafaimaadka Md Xuseen Muxumud Maxamuud (X XOOG), Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye ee Gobolka Awdal.
Dhanka kalena xubnaha murashixiinta golaha deegaanka ee G/Awdal ayaa kala qayb galay taageerayaasha xisbiga oo isu soo baxayo ka kala sameeyey degmooyinka Qon u Jeed iyo Boon, halka wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare uu isna kala qayb galay taageerayaasha Degmada baki.
Previous PostLixda wadan ee aduunka ugu awoodda badan oo shir Brussels ka dhacay hubka Iran kaga hadlay!!Next PostWefti Ka socda Guurtida oo olole wacyi-gelin ah ka bilaabay Gobolka Salel	Blog